မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: အမေရိကန်သမ္မတ၏ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို. ပေးစာ
နိုဝင်ဘာလ ကုန်နှင့် ဒီဇင်ဘာလဆန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးလာရောက်ခဲ့သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ၏ခရီးစဉ်တွင် အမေရိကန် သမ္မတက ပေးစာ နှစ်စောင်ထည့်သွင်းပေး လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ပေးစာ တစ်စောင်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ သို့ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန် ပေးစာ တစ်စောင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ သို့ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ မစ္စတာအိုဘားမား၏ ပေးစာကို နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတ အိမ်တော်ဧည့်ခန်း၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံစဉ်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံသို့ပေးစာကိုမူ ရန်ကုန်မြို့တွင် သူမနှင့်အတူ ညစာစားစဉ် ဟီလာရီကလင်တန် က ပေးအပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ပေးစာနှစ်စောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့်ပတ်သက်၍ စူပါ ပါဝါနိုင်ငံကြီး တစ်ခု၏သဘောထား အမြင်ကို ထင်ဟပ် နေခြင်းကြောင့် အတွက် ဘာသာပြန် ဆိုဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ခင်ဗျား . . .
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းနှစ်ပတ်ခန့်က ဘာလီကျွန်း မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန်- အာဆီယံခေါင်း ဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ကျွန်တော် တို့နှစ်ဦး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တာကို ကျေနပ် မိပါတယ်။ အဆွေတော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်း ကို တွန်းအား ပေးတဲ့ခြေလှမ်းတွေများ စွာ လုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကို ကျွန်တော်အားပေးလိုပါ တယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အတွက် အဆွေတော်ရဲ့ အမြင်ကို နှစ်ဦး သဘော အရဆွေးနွေးဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှုမြှင့် တင်ရေးဆိုင်ရာ အဆွေတော် ရဲ့ကြိုးပမ်းအား ထုတ်မှုတွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က ဘယ်လို အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်မလဲဆို တာလေ့ လာဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန် ကို အ ဆွေတော်ရဲ့နိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ပြီး အဆွေတော်တို့ အစိုးရ သာမက ပြည်သူများနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆွေး နွေးကာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ဖို့ မျှော်လင့် ခဲ့ပါတယ်။ ကလင်တန် အနေနဲ့ အပြန်အလှန် စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေကို အခြေခံပြီး ကျွန်တော် တို့မှာ ဆက်လက်ရှိနေ သေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှု တွေကို အဆွေတော်ရဲ့အစိုးရနဲ့ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းပေးမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန် ယခင်က ပြောခဲ့ဖူးသလို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေအများကြီးရှိပါသေး တယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အောင်မြင်ရေးအတွက် အဆွေ တော်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာ စစ်မှန်တဲ့ လက်တွဲဖော် အဖြစ်ရပ်တည်သွားဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။
ဒီသမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ၌ အဆွေတော် တို့အစိုးရရဲ့ ကူညီမှုကို လေးစားစွာ အသိ အမှတ်ပြုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကလင်တန်ရဲ့ဆွေးနွေးမှု တွေမှ တစ်ဆင့်လက်ဆုပ် လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့ အကျိုး ရလဒ်တွေကြားသိရဖို့ ကျွန်တော် စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ သူမနဲ့ဆွေး နွေးမှု တွေမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံ ဆက် ဆံရေးမှာ စာမျက်နှာ သစ်ဖွင့်နိုင်မယ့်လမ်း ကြောင်း ထက်သို့ရောက်ရှိ မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျား . . .
မကြာသေးမီက အသင်နဲ့စကားပြောခွင့် ရခဲ့တာကို ကျွန်တော် ပျော်ရွှင် ၀မ်းမြောက်မိ သလို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တယ်လီ ဖုန်း ပြောဆိုမှုမှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ကျွန်တော်ဟာ ဒီမိုကရေစီ အတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ မမှိတ်မသုန်ဆောင် ရွက်နေတဲ့ အသင့်ရဲ့ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတွေကို လေးစား နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ အသင်နဲ့ စကားပြော ခဲ့ရခြင်းဟာ မကြာ သေးမီက ကျွန်တော့်ရဲ့ အာရှ ခရီးစဉ်၏ မီးမောင်းထိုးမှု တစ်ရပ်အဖြစ် ယူဆမိ ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးသို့ ဦးတည်တဲ့ တွန်းအားပေး ခြေ လှမ်းများစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ကျေနပ်မိပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ရေးဝန် ကြီး ကလင်တန်ရဲ့ခရီးစဉ် ဟာ ယူနီဗာ ဆယ်လူ့ အခွင့်အရေး အပေါ် အလေးထားမှုနဲ့ နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍ သစ် ဖွင့်လှစ်ရေးကို မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဘယ်လို အထောက် အပံ့ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာဆန်းစစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာပြည်သူ တွေ ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရည်မှန်းချက်တွေကို ကူညီနိုင်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က အ လေးအနက် ကတိပြု ထားမှုကိုလည်း ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ကြိုဆို တဲ့အတွက် အသင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အသင်နဲ့ နောက် တစ်ကြိမ် စကားပြောခွင့်ရဖို့ လည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လုံးရှိ တရားမျှတမှု၊ လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးများကို မျှဝေသူတွေ အားလုံးအတွက် အသင် ပေးစွမ်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေအတွက် လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အခု အသင်နဲ့အတူရပ်တည် နေပါပြီ။ ဒီလို အမြဲတမ်း ဆက်လက်ရပ်တည် သွားမှာပါ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:42 AM